How to Transfer to a Different School District | Boston School Finder
How to Transfer to a Different School District
Muxuu yahay Barnaamijka Xulashada dugsiga Degmada?
Massachusetts waxay bixisaa barnaamijka doorashada dugsiga degmada dhexdeeda ah. Barnaamijkan wuxuu u oggolaanayaa qoysaska inay ka diiwaangeliyaan ilmahooda degmo dugsiyeed aan ahayn degmada degmada ilmahoodu dagan yahay. Gaadiid looma fidinaayo ardeyda dhigata degmo dugsiyeed kale oo barnaamijkaan hoos imaanaysa.
Sabab la xariirta boosaska oo kooban, maahan in dhammaan dugsiyada degmada ee Massachusetts ay aqbalaan ardayda degmada ka baxsan degmada ee ku jira barnaamijkan. Sanad kasta, gudigga dugsiga ee degmo dugsi dawladeed kasta oo ku yaala Massachusetts ayaa u codeeya inay aqbalayo arday cusub iyo in kale oo lagu xulanaayo barnaamijka dookha dugsiyada gudaha degmada iyo, haddii sidaas la yeelaayo, fasalada arday cusub loo xulaayo.
Haddi doonayso in cunugaagu dhigto dugsi ku yaala degmo kale oo hoos timaada barnaamijkaan — degmadaasna ay aqbalayso ardayda — waa inaad la xariirtaa Xafiiska Maamulaha Guud si toos ah kaasoo ku sugan degmada aad doonayso inaad cunugaaga ka qorto.
Inter-District Transfer Application Timeline & Checklist
Qoysasku waa inay bilaabaan howsha kala wareejinta xilliga jiilaalka ama gu'ga ka hor sanadka aad rabto inaad qorto canuggaaga.
Degmooyinka guud ahaan waxay u baahan yihiin soo gudbinta arjiga. Haddii arday badani codsadaan wax ka badan meelaha boosaska banaan, degmadu waxay samayn doontaa bakhtiyaa nasiib si ay u xushaan ardayda loo oggolaanayo dugsiga. Haddii degmadu ay soo gaaraan codsadayaal ka yar kuraasta loogu talagalay ardayda soo xulata dugsiga, waxaa laga yaabaa inay doorato inay aqbasho ardayda wakhti kasta inta lagu jiro sannad dugsiyeedka. Walaalka ilmo cunug hadda dhigta dugsi ku yaal degmo kale oo ku jirta doorashada dugsiga ayaa muhiimad gaar ah lagu siinayaa nidaamka bakhtiyaa nasiibka.
Degmada qasab kuma ahan inay oggolaato codsiga ubadkaaga ee gelitaanka degmo kale. Ilmahaagu wuxuu xaq u leeyahay inuu ku codsado barnaamijka doorashada dugsiga degmo kale xitaa haddii degmada aad dagan tahay aysan aqbalidoonin isqorista loo maro xulashada dugsiga.
Marka cunuggaaga laga aqbalo degmo kale oo uu ku codsaday dookhayada dugsiga, wuxuu xaq u leeyahay inuu dhigto dugsiyada degmada ilaa qalinjabinta dugsiga sare uu ka gaaro. Khasab kuguma aha inaad dib u dalbato sanad walba.
List of Participating School Districts
Laga bilaabo Oktoobar 2021. Lifaaqyada waxaa lagu bixiyey boggaga hore ee dagmo dugsiyeed kasta oo ka qaybgalaya. Meeshii la helikaro, lifaaqyada waxaa lagu bixiyaa aaladaha wax la isugu gudbiyo.